चिसोमा ओठ फुट्ने समस्याको सामधान गर्ने कसरी ?
मुख्य पृष्ठHealth Tips स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवनशैलीचिसोमा ओठ फुट्ने समस्याको सामधान गर्ने कसरी ?
पुस लागेसँगै चिसो बढेको छ । जाडो मौसममा अधिकांश मानिसको छाला, ओठ सुख्खा भएर छाला फुट्ने समस्या हुन्छ ।
मानिसको सौन्दर्यको प्रतिकको रूपमा लिइने ओठ जाडोको महिनामा अत्यधिक फुट्ने हुँदा तनावको विषय बन्न सक्छ बाहिरको तापक्रम घट्दै गएमा ओठमा रहेको ग्रन्थिहरूमा प्रभाव पर्दा ओठ फुट्न थाल्छ ।
ओठ फुट्न नदिनका लागि विभिन्न घरेलु विधिहरू अपनाउन सकिन्छ । ओठमा मह, घिउ, नरिवलको तेल, दूधको छाली, गिल्सिरिन, बदामको तेल आदि हलुका तरिकाले लगाउँदा ओठ फुट्ने समस्या कम हुन्छ । सन्सक्रिन युक्त लिप गार्ड, भ्यासेलिनको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
धुम्रपानका कारण पनि ओठ फुट्न, सुक्खा तथा कालो हुन सक्ने हुँदा धूम्रपानलाई त्यागेर प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ ।